This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please if you can. The talk page may contain suggestions.
ဆရာကြီး ဖူနာကိုရှိ ဂီချင်း နှင့် ဆရာကြီး မာဆာတိုရှိ နာကာရားမား ၏ တပည့်ရင်းဖြစ် သော ဆရာကြီး ဟီရိုးခါ့ဇု ကာနာဇာဝါ (၁၉၃၁- )
ကရာတေး (karate 空手) နှင့် ကရာတေးဒို (karate-do 空手道) အတူတူပဲလား!
ကရာတေး (karate 空手) နှင့် ကရာတေးဂျစ်ဆု (karate-jitsu 空手術) အတူတူပဲလား!
ကရာတေး 空手 ("empty hand") (လက်နက်မဲ့ ခုခံကာကွယ်ခြင်း)
သိပ္ပံနည်းကျ ကရာတေး နှင့် သင်ကြားခြင်း၊ သင်ယူခြင်းပညာ
ဂျပန်ပြည်ကရာတေးကိုယ်ခံပညာ နှင့် ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာအစ- ဆရာတော် ဗောဓိဓမ္မ က
ကရာတေး ကျင့်စဉ်(၁၀) ချက်
ကရာတေးဆရာ(sensei 先生/teacher/instructor) ၏တာဝန် နှင့် ကျောင်းသား learner (student) ဗဟိုပြု သင်ကြားရေးစနစ်
ကရာတေးပညာ နှင့် အသက်ရှူခြင်း (breathing)
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါကျွန်းတွင်ကိုယ်ခံပညာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဆရာကြီး ဖူနာကိုရှိ၊ ဂီချင်း တို့၏ ကရာတေး(karate) နှင့်(kara) "ဗလာ"
j.k.a ကရာတေးဆရာကြီး မာဆာတိုရှိ နာကာရားမား
ပညာအဆင့်အရောင်နှင့် ဘွဲ့တံဆိပ် သင်္ကေတ
ကရာတေးပညာ ဂျပန်နိုင်ငံမှ အခြားနိုင်ငံများသို့ပျံ့နှံ့မှု